Mila manilika ny adiadiny ny Rosiana mpanohitra ka mivondrona manohitra ny ady · Global Voices teny Malagasy
Mifanoratra tahaka ny mpifahavalo ireo andrin'ny fanoherana
Voadika ny 25 Mey 2022 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Español, Italiano, русский, Português, English
Fihaonamben'ny 24 Desambra 2011, Lalambe Shakarov, Moskoa. Sary avy amin'i Bogomolov.PL, tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0,)
Ity lahatsoratra nosoratan'i Ivan Zhilin, mpanao gazetin'ny Novaya Gazeta teo aloha ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Geneva Solutions. Navoaka eto indray ny dika nasiam-panitsiana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty miaraka amin'ny Global Voices.
Toa tsy ho vita ny hanarina ny firenentsika. Na dia amin'ny fotoana toa izao aza, mbola mamerina ireo fahadisoana mitondra mankany amin'ny fanafihana an'i Okraina ny olona tsara indrindra eto amintsika.
Ahoana no namelantsika ny ady hitranga? Tsy noho ny tsy firaharahantsika, ny fiaretana tsy misy fiafarana, ary ny fahavononantsika hiaritra karazan'olana mba hisian’ny “hoavy mamirapiratra” (izay noheverintsika fa nomanin’ilay lehilahy nanome baiko hanapoaka baomba an’i Kyiv) ihany, tsy noho ny tsy fahavononantsika hanova zavatra (satria “ratsy kokoa izany taloha”) ihany, fa noho ny tsy firaisan-kinantsika ihany koa. Tonga tamin'ity ady androany ity koa isika satria tsy afaka nifanaraka mihitsy ireo mpikambana ao amin'ny Rosiana mpanohitra.
Jereo ohatra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2011–2012. Taorian'ny fihetsiketsehana mahery vaika nahitàna mpandray anjara 100.000 manohitra ny hoso-pifidianana tao amin'ny Kianjan'i Bolotnaya sy ny araben'i Sakharov ao Moskoa, taorian'ny diabe lavabe namakivaky ny Lalana Yakimanka, taorian'ny “Faribolana Fotsy Goavambe (rehefa nanodidina ny afovoan'i Moskoa ireo mpanao fihetsiketsehana), ary taorian'ny #OkkupaiAbai ( rehefa nitoby nandritra ny herinandro tao afovoan-drenivohitra ireo mpanohitra ny filoha), dia nanapa-kevitra hanangana Filankevitra mpandrindra ireo Rosiana mpitarika ny mpanohitra.
Mazava ny andraikitry ny filankevitra: manosika ny governemanta hanavao ny rafi-pitsarana sy ny fifidianana ao Rosia. Namory ireo mpanohitra isan-karazany ny filan-kevitra: manomboka amin'i Alexei Navalny, izay nisy fotoana nitambezombezo tamin'ny nasionalista, ka hatrany amin'ilay cosmopolitan Ksenia Sobchak, avy amin'ny liberaly Boris Nemtsov ka hatramin'ny sosialista Sergey Udaltsov.
Efa fantatry ny Rosiana tsara ny hiafaran'ity tolona iraisana ity. Taorian’ny famoriam-bahoaka vitsivitsy monja dia nifamaly ny mpanohitra, niezaka ny hamoaka hoe ny paikadin’iza amin’ny ady amin’ny fitondrana no mety, na iza no hotohanana amin’ny fifidianana, ary vola tahaka ny ahoana no tokony hatokana amin’izany. Ary herintaona taorian’ny nananganana ny Filankevitra mpandrindra dia noravan’izy ireo izany, ka tsy nisy fiovana mihitsy teo amin’ny lamina ara-politikan’ny firenena.
Hitam-bahoaka ity fipatitaky ny Rosiana mpanohitra ity taty aoriana tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitarika ny antoko Yabloko sy Alexei Navalny, tamin'ny fifandonana teo amin'ny herin'ny elatra havia tsy anaty rafitra isoloan'i Sergei Udaltsov sy ireo mpiara-miasa aminy tena, miaraka amin'ny liberaly sy ny komonista parlemantera, ary farany, na dia ho setrin'ny Loka Nobel Fandriampahalemana nomena an'i Dmitry Muratov, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Novaya Gazeta aza (nihevitra ny olom-pirenena Rosiana mpanohitra sasany fa tokony ho any Navalny ilay loka).
Ary ankehitriny, tamin'ny fiandohan'ny volana fahatelon'ny ady tany Okraina, nanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ny Rosiana mpanohitra — hamely ny tenany. Tamin'ny 26 Avrily, namoaka “Lisitry ny Mpitabataba” ireo mpanohana an'i Navalny, izay nahitana an'ireo mpanao gazety Kseniya Sobchak sy Oleg Kashin (izay nanohitra ampahibemaso ilay antsoina hoe “hetsika manokana”), ankoatra ireo mpikambana 30 ao amin'ny Filankevitry ny Fiarovana Rosiana, manam-pahefana ao amin'ny ministeran'ny fiarovana miisa 101, iraky ny filoham-pirenena miisa 473, tompon'andraikitra hafa amin'ny fiarovana ary ” olo-malaza mpanao kolikoly.”
Hoy ny dosie an'ny mpomba an'i Navalny momba an'i Kashin:
Rosiana propagandista, mamoaka ao amin'ny vohikala kashin.guru sy ao amin'ny famoahana Repoblika. Tsara eto ny manamarika fa ny Repoblika sy ny tonian-dahatsorany antsoina hoe Dmitry Kolezev dia tsy nitsahatra nijoro manohitra ny ady. I Kashin mihitsy no nilaza fa i Okraina no “antokon'ny marina amin'ity ady ity”. Nohazavainy fa ny fampidirana azy ao amin'ny lisitry ny “mpitabataba ady” dia noho ny “valifaty” ataon'ny Navalnista tamin'ny fifandonana teo aminy sy ny mpanohana an'i Navalny.
Ny dosie mbola henjana kokoa momba an'i Ksenia Sobchak:
Rosiana mpanao propagandy… na dia teo aza ny fanononana azy ho manohitra ny fitondran'i Vladimir Potinina, ny fihetsiny amin'ny tranga maro no nanome azy (Potinina) rariny [ara-dalàna]: anisan'izany ny fanampiana azy ho ara-dalàna nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2018, izay nandraisany anjara amin'ny maha-kandidà mpandrava azy.
Ary mitranga izany dia na dia eo aza ny zava-misy fa iray amin'ireo loharanom-baovao malaza indrindra ao Rosia manohitra ny ady tsy voasakana ny tambajotran'i Sobchak amin'ny fantsona Telegram manana mpanjohy mihoatra ny 1,5 tapitrisa amin'izao fotoana.
Tsy dia bado loatra aho raha mihevitra an'i Sobchak, izay zanakavavin'i Vladimir Potinina amin'ny batemy, no vonona ny hiady mafy aminy sy hanandrana hanala ny fahefana aminy mba hampitsaharana ny ady. Saingy miharihary fa manao izay azony atao izy mba hanampiana amin'ny fanabeazana ny Rosiana sy hamoha azy ireo amin'ny torimasony ara-miaramila. Raha tsy avy aminy manokana dia amin'ny alàlan'ny mpanao gazetiny.
Ary, mandritra izany fotoana izany, mbola ao anaty lisitra izy — araka ny filazan'ireo Rosiana mpanohitra hafa — miaraka amin'ity fanazavana ity: “Tompon'andraikitra ny tsirairay amin'ireo olona ireo amin'ny zava-misy fahapotehan'ny (hoavin'ny) Okrainiana an-tapitrisany sy ny fidinan'ny fari-piainan'ny Rosiana an-tapitrisany ho ambany kokoa.”
Ankoatra ireo kasinga hafa, ny hetsika amerikana mahery vaika manohitra ny ady mampiray ny hippies an-tanàndehibe sy ny mpiasan'ny ozinina, ny komonista sy ny liberaly, ny mpandeha am-piangonana sy ny miaramila taloha no nanampy tamin'ny fampitsaharana ny Adin'i Vietnam. Niara-nitsangana tao amin'ny Capitol izy ireo, niditra tao amin'i Lincoln Park tao Chicago, ary nanao sit-in teo amin'ny tohatry ny Pentagon.
Indrisy anefa fa raha tokony mamory ny mpanohana azy rehetra amin'ny teny filamatra manohitra ny ady, fa tsy manilika ny tsy fitovian-kevitra ao amin-dry zareo manoloana ny ady ny Rosiana mpanohitra, dia miroso amin'ny fanoratana milaza ny ankilany ho fahavalo. Ny hany zavatra mampitsiry fanantenana dia ny fiovana ankapobeny ao Rosia mitranga amin'ny fomba tsy ampoizina indraindray :
Tamin'ny taona 1953, i Nikita Khrushchev dia sekreteran'ny Komitin'ny Foiben'ny Antoko Komonista Rosiana manontolo i Nikita Khrushchev, iray amin'ireo lehilahy akaiky indrindra an'i Stalin, fa tamin'ny taona 1956 dia izy no lehiben'ny expositor (mpanapongatra ny nataony).[Feno ve io fehezanteny io?]
Tamin'ny 17 Marsa 1991, nisy fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fitandroana ny URSS (ary 76,4 isanjato no nanohana azy io), fa nirodana ny Firaisana Sovietika tamin'ny 26 Desambra.
Ankehitriny ihany koa angamba hiitatra amin'ny zavatra tsy ampoizina ny hetsika manohitra ny ady sy ny fifikirana tsy hanao ady. Ary handresy amin'ny fomba tsy nampoizina ry zareo.
Ho amin'ny torohay bebe kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny pejy manokana Rosia manani-bohitra an'i Okraina.